Britain oo si naadir ah dhalasho ugala laabanaysa hooyo umul ah - BBC News Somali
Shamima ayaa sawirkan laga qaaday Isniintii markaas oo BBC-da ay waraysi ka qaadaysay
Shamima Begum oo ku biirtay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ee Suuriya iyadoo 15 jir ah ayaa hadda waayaysa muwaadinnimadeeda UK.
Tasnime Akunjee oo ah qareenka qoyska ayaa sheegay in qoysku "ay aad uga xumaadeen" go'aankaas ayna ka baaraan dagayaan sida ay sharciga u miciin bidi karaan.
Waraysi ay BBC-du la yeelatay Isniintii, ayay Begum ku sheegtay in aysan marnaba doonanin "in ay astaan u noqoto" kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka, haddana ay doonayso in ay ilmaheeda ku korsato Britain.
Telefishinka ITV ayaa helay waraaq loo diray Begum hooyadeed, taas oo lagu loogu sheegayo in ay gabadheeda ku wargaliso go'aanka laga qaatay.
Sharciga muwaadinnimada Britain ee la meel mariyay sannadkii 1981dii wuxuu dhigaa in qof muwaadinnimada laga noqon karo haddii wasaaradda arrimaha guduhu ay ku qanacdo "in sidaas ay dan ugu jirto bulshada" isla markaasna arrintaasi aysan horseedayn in qofkaasi uu noqdo dal la'aan.
MP George Freeman oo ah xildhibaan ayaa sheegay in go'aanka dhalashada loogala noqonayo uu yahay "khalad waddo furaya".